Cassida 7750R Yakasanganiswa Denomination Mari Counter - CashCounterMachines.com
musha Cassida 7750R Mixed Denomination Money Counter
Inoverenga Mabhiri neDenomination: Yakanakira kuverenga mabhiri akasanganiswa uye kupa huwandu hwemari yakakosha pamwe nenhamba yemabhiri akaverengwa.
Inochengetedza Nguva: Inoverengera kusvika chiuru yakasanganiswa mabhiri paminiti ichizvizivisa otomatiki masangano uye kuteedzera zvese kuverenga uye kukosha kwemabhiri.
Pa-Screen Kuzivisa: Inogadziriswa LCD inoratidzira ine nyore mushandisi ine hushamwari interface uye pa-skrini yakadzama rondedzero inoratidza kuparara kwekuverenga nedhinominesheni.
Yepamberi Kuongororwa Kwekunyepedzera: Inodzivirira bhizinesi rako kubva kumanyepo uchishandisa indasitiri inotungamira UV, MG, IR uye yekuziva mufananidzo wekunyepedzera detector tekinoroji.
Inogona kupetwa neUniversal Cash inobata Thermal Printer kudhinda risiti ine udzame yemari yakaverengwa. (inotengeswa zvakasiyana).
Iyo 7750R ndeye yakasanganiswa yedhinomendi mari counter uye kukosha muverengi, uye mhinduro yakanakisa yaunoda kana uchibata nemabhiri akawanda uye shoma shoma nguva. Yakagadzirwa ine hopper uye stacker inokwana mazana maviri emabhiri (asina kutenderedzwa), muchina uyu unogoneka uchaverenga masangano mazhinji nekururama kwakavimbika uye nekumhanya kwakadzikama kunosvika chiuru chemadhora paminiti.
Yakashongedzerwa ne3 mashandiro modes (Sanganisa, Ronga, uye Verenga) uye mamwe maficha (ADD, Batch, uye ADD + Batch) kubatsira kukwenenzvera chero mari yekubata mashandiro iyo 7750R inochengetedza huchokwadi uye kushanda nesimba pasina kurega kuchengetedza.
Iyo 7750R inonyatsoratidza kugona kwayo kwakasimba paunenge uchishandisa 'Mix Mode' uye 'ADD Feature' pamwe chete kuunganidza mari yako, ichipa iyo yakazara kukosha kwemari, uye zvakare ichipa yakadzama rondedzero yakaputswa nesangano. Kubatanidza 7750R neCassida Universal Printer (inotengeswa yakaparadzana) zvichabatsirawo kuchengeta mishumo yakadzama yezvikamu zvekuverenga zvemarekodhi ako pachako kana paunenge uchiisa mari kubhangi.
Ichishandisa yemhando yepamusoro kuona yekunyepedzera (ultraviolet 'UV', magineti 'MG', infrared 'IR', uye ma sensors emifananidzo 'CIS'), iyo 7750R inokurumidza, yakarurama, uye iri nyore kushandisa ichikuchengetedza nguva nemari, ichiramba yakavimbika uye. safe.